Madaxweynaha maamulka Somaliland Siilaanyo oo qaliin caafimaad ku galay Imaaraatka carabta | SAHAN ONLINE
Madaxweynaha maamulka Somaliland Siilaanyo oo qaliin caafimaad ku galay Imaaraatka carabta
DUBAI – Madaxweynaha maamulka Somaliland Axmed Maxamed Siilaanyo ayaa xiligan howlo caafimaad u jooga dalka isutagga Imaaraatka carabta kadib markii maalintii shalay uu ka ambabaxay Hargeysa.
Warbaahinta Somaliland qaarkeed ayaa baahiyey in Madaxweynaha qaliin lagu sameeyey ,waxaana arrintan si degdeg ah uga jawaabtay Madaxtooyada Somaliland.
Afhayeenka Madaxtooyada Somaliland Xuseen Deyr ayaa warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa,wuxuuna sheegay in xaalada caafimaad ee Madaxweyne Siilaanyo tahay mid wanaagsan.
Jimcihii ayuu Madaxweynaha u baxay baaritaan Caafimaad, Abu dubai ayuu ku sugan yahay, waxaa uu Madaxweynuhu galay baaritaan caafimaad oo hal maalin ah, qabsin ayaa laga qalay, caafimaadkiisana waa wanaagsan yahay 100%”ayuu yiri Afhayeenka Madaxtooyada Somaliland.
Xuseen Deyr ayaa sheegay in qaliinku uusan ahayn mid weyn oo jeexid ah balse habka casriga ah ee qaliinka lagu fuliyo ee leysarka lagu sameeyey,wuxuu wax kama jiraan ku sheegay sida ay warbaahintu sheekada u dhigtay.
Qaliin wuxuu noqon karaa mid farta laga qalo ama wadnaha, laakiin Qaliinka Madaxweynaha wax weyn ma ahan, qabsan ayaa lagaga saaray, qalabkan Teknoolijiyada ee Leysar System ayaa lagaga saaray, maantaba wuu socdaa, xaaladiisa caafimaad waa wanaagsan tahay”ayuu yiri.
Wuxuu sheegay in sida ugu dhakhsiyaha badan uu Madaxweyne Siilaanyo ugu soo laaban doono magaalada Hargeysa.
Bishii hore ee July ayey warbaahinta Somaliland qaarkood sheegeen in Madaxweyne Siilaanyo uu xaalad caafimaad u joogo Imaaraatka carabta ,walow markii dambe mas’uuliyiin ka tirsan Somaliland beeniyeen.